प्रदेशसभामा दाङको पल्ला भारी कि बुटवलको ? |
गृह पृष्‍ठ खबर प्रदेशसभामा दाङको पल्ला भारी कि बुटवलको ?
प्रदेशसभामा दाङको पल्ला भारी कि बुटवलको ?
प्रकाशित मिति : २०७७ आश्विन १९ , सोमबार ०८:३८
प्रदेश ५ को राजधानी बुटवल कि दाङ भन्ने विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० भित्रै फरक मत देखिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेको भोलिपल्ट शनिबार बसेको प्रदेश ५ नेकपा संसदीय दलको बैठकमा भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दधिराम न्यौपाने, विष्णु पन्थी, युवराज खनाल लगायतका १४ जनाले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् ।
त्यसैगरी नेकपा, रुपन्देहीले प्रदेश राजधानी सार्ने प्रस्ताव संविधानको भावना विपरीत रहेको दाबी गरेको छ । रुपन्देही आसपासका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पनि बुटवल नै राजधानी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि दाङको पक्षमा रहेको बताइएको छ । तर संविधानतः प्रदेश राजधानी र नाम के राख्ने भन्ने तय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई छ ।
प्रदेशसभाका दुई तिहाई सदस्यको मतले जे निर्णय गर्छ त्यही अन्तिम हुन्छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा दुई तिहाईका लागि ५८ सांसद आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
प्रदेश ५ मा नेकपाको दुई तिहाई अर्थात ६१ सांसद छन् । नाम र राजधानी टुंगो लगाउन नेकपाका सांसदहरूकै मत पर्याप्त छ । तर, यो मत झिनो ९४ भोट० छ ।
शनिबारको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका १४ सांसदले प्रदेश सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएको अवस्थामा भने नेपाली कांग्रेसको समर्थन आवश्यक पर्दछ ।
कांग्रेसका १९ सांसद छन् । त्यसमध्ये बहुमत सांसद दाङको पक्षमा देखिन्छन् । पार्टीले ह्विप नलगाउँदा ७र८ सांसदले बुटवलको पक्षमा भोट दिने कांग्रेसका एक प्रदेशसभा सदस्यले जानकारी दिए ।
नवलपरासी स्थायी घर भएका कांग्रेस नेता देवेन्द्रराज कँडेल भने प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई ह्विप लगाउन नहुनेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशका मानवीयहरूलाई स्वविवेकको अधिकार दिनुपर्छ ।’
प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० का ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । जसपाका चार सांसद दाङ र दुईजना बुटवलको पक्षमा देखिएका छन् ।
जसपा संसदीय दलका नेता सहषराम यादव भने आफ्नो पार्टीको मत विभाजन नहुने बताउँछन् । यादव भन्छन्, ‘छलफलमा विभिन्न विचार आउनु अस्वाभाविक होइन । तर, पार्टीबाट निर्णय गरेर मत हाल्छौं ।’
नेकपा प्रदेश ५ का एक नेता भने आफ्नो पार्टीका १४ सांसदले विपक्षमा मत दिए पनि दाङको पक्षमा सजिलै दुई तिहाई पुग्ने दाबी गर्छन् । ती नेता भन्छन्, ‘ह्विप नलगाउने हो भने नेकपाको ७र८ मत पुग्दैन ।’
तर, दाङ आसपासका कांग्रेस र जसपाका सांसदहरूको मत आउने निश्चित प्रायः भएको नेकपाका ती नेताको भनाइ छ । उनी ८० प्रतिशत भन्दा बढी सांसदहरू दाङको पक्षमा रहेको दाबी गर्छन् ।
यसैैवीच नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले आइतबार बालुवाटारमा अध्यक्षद्वयलाई भेटेर दाङलाई राजधानी बनाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् ।
पछील्लो पोस्ट प्रदेश ५ मा भालुवाङको चर्चा, यस्तो छ ईतिहास
अगिल्लो पोस्ट गुल्मीमा ट्याक्टर दुर्घटना एकजनाको मृत्यु